Amniotic fluid leakage ရေမြွာရည်ဆင်းခြင်း – Mawlamyine Daily
Posted on September 7, 2018 by Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် ၃၀ပါ ၂၉ နှစ်မှာ အိမ်ထောင်ကျပါတယ် အခုသားဦးကိုယ်ဝန်ပါ ၉ လပြည့်ဖို့ ၅ ရက်ပဲ လိုပါတော့တယ် OG လည်း အပ်ထားပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီလောက်ကစပီး ရေတွေဆင်းနေလို့ပါ ဆရာ OG ဆီ ဖုန်းဆက်တော့ ဖုန်းမကိုင် လို့ပါ အဲဒါ အခုပဲ ဆေးရုံသွားသင့်ပီလား ဆရာ စိုးရိမ်ရလားရှင့် ကလေး ရေမွန်းတာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးရိမ်လို့ပါ
မွေးမဲ့ဆီ သွားသင့်။ ကလေးလှုပ်နေတာကောင်း။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမ ခုကိုယ်ဝန် ၃၆ပတ်ရှိပါပြီရှင့် ၇လမှာ PE ရပါတယ်အဲ့ကတည်းက Nephitapine 20mg BD labitalol tds သောက်နေရပါတယ် USG ရိုက်တယ် ၂ပတ်တခါ AFI ကနည်းနည်းလာတယ်ခု 9.2 ဘဲရှိတော့တယ်ဆရာ OG ကတပတ်ဘဲထပ်စောင့်မယ်ပြောပါတယ် ကလေးလည်းကောင်းကောင်းလှုပ်နေတယ် အဲ့ဒါ AFI ကဘယ်လောက်လောက်ဆို ဂိတ်ဆုံးနည်းလို့ရပါသလဲဆရာ ကျမ ၂ပတ်လောက်ထပ်စောင့်ချင်လို့ပါ
အသက် မပြောပါ။ အတိုကောက်တွေကို မှန်းယူရတာ မသင့်။ စမ်းသပ်ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်က လိုတာညွှန်မယ်။
အသက်က ၂၉ ပါရှင့်ဆရာ preclamsia ရတာပါရှင့် AFI က Liqour intent ကိုပြောတာလို့ပြောပါတယ် AFI level က အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိရမှာလဲရှင့်ဆရာ မွေးခါနီးခန်းခန်းသွားတာလား dribling လည်းမရဘဲနဲ့လေ
Dribbling လို့ရေးရတယ်။ Content လို့ ရေးရတယ်။
၃။ ဆရာရှင့် ရေမွှာ 9.5 ဆိုဗိုက်နာတဲ့ထိစောင့်လို့ရလားရှင့်။ ခုကိုယ်ဝန်က ၃၈ ပတ်ပါ။ (အသက် မပြောပါ။)
၄။ ရေမွန်းတာကို English လိုဘယ်လိုပြောရပါလဲဆရာ (အချပ်အလက် တခုမှ မပြောပါ။)
ရေမွန်းတယ်လို့တော့ မခေါ်ပါ။ ရေမြွာစောပေါက်တာရှိတယ်။ ကလေးဖိအားသက်ရောက်ခံရတာရှိတယ်။ ရေမြွာရည်သွေးကြောပိတ်တာ ရှိတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရေမြွာရည်ဆိုတာ ကိုယ်အပူချိန်အတိုင်းနွေးနေတယ်။ ရေမြွာရည်ထဲမှာ ဟော်မုန်းတွေ၊ ခုခံမှုဆိုင်ရာဆဲလ်တွေ၊ အာဟာရဓါတ်တွေနဲ့ ကလေးဆီး ပါတယ်။ ကလေး လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားနေနိုင်တယ်။ အကာကွယ်ပေးထားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကောင်းစေတယ်။ အပူချိန်ထိန်းပေးတယ်။ ရေမြွာရည်ဆိုတာ ကြည်လင်နေပြီး နည်းနည်းလေးဝါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၄-၃၆ ပတ်မှာ အများဆုံး ရှိတယ်။ ပျမ်းမျှ ၈ဝဝ စီစီ ရှိတယ်။ မွေးကာနီး ၄ဝ ပတ်မှာ ၆ဝဝ စီစီရှိတယ်။ ကလေးအမြွာဆို ပိုများမယ်။
ရေမြွာရည်များလွန်းတာကို Oligohydramnios လို့ခေါ်တယ်။ နည်းလွန်းတာကို Oligohydramnios လို့ခေါ်တယ်။
ကလေးက ရေမြွာရည်မျိုချတယ်။ စွန့်ထုတ်တယ်။ ၁၆ ပတ်မှာ ကလေးကျောက်ကပ်ဖြစ်လာလို့ ဆီးဖြစ်လာပြီး အဲတာထဲမှာပဲ စွန့်ထုတ်တယ်။ ရေမြွာရည်ထဲမှာ ရေ + ဓါတ်ဆားတွေ + (၁၂-၁၄ ပတ်နောက်မှာ ပရိုတင်း + ကာဗွန်ဟိုက်ဒရတ် + အဆီ + ယူရီယာ) တွေပါနေတယ်။ pH 7.0 ကနေ 7.5 အထိရှိတယ်။ ဗဂျိုင်းနာမှာ pH 3.8-4.5 ရှိတယ်။ အဲတာများနေရင် ရေမြွာရည်စိမ့်နေသလား စဉ်းစားရမယ်။ ရေမြွာအိတ်ပေါက်ရင် စိမ့်ထွက်မယ်။ စီးထွက်မယ်။ ပန်းထွက်မယ်။ မွေးချိန်မတိုင်မီ ထွက်တာ မကောင်းပါ။ မွေးကာနီး အလိုလိုပေါက်မယ်။ စောမွေးစေလိုရင် တမင်တကာ ဖေါက်ပေးနိုင်တယ်။ ဖောက်ပြီးတာနဲ့ ကလေးနဲ့ အပြင်လောကကြီး လမ်းပွင့်သွားပြီ။ ကူးစက်နိုင်တာတွေက ကလေးဆီေ ရာက်လာနိုင်ပြီ။ ကလေးကဆီးကိုပါမျိုးချလို့ meconium (မီကိုးနီးယမ်း) ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်။ ကလေးဝမ်းကို ပြောတာပါ။
Fetal distress ကလေးဖိအားသက်ရောက်ခံရခြင်း
အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ကလေးမှာ အောက်စီဂျင်လုံလောက်အောင်မရတာကိုခေါ်တယ်။ ခန့်မှန်းမွေးရက်ထက် ကျော်လာရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပုံမှန်မဟုတ်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးနှလုံးခုန်တာ စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ လိုအပ်လာရင် မိခင်လောင်းကို အောက်စီဂျင်ပေးရမယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးရည် သွင်းပေးရမယ်။ အနေအထားပြုပြင်ပေးရမယ်။ ဥပမာ တဖက်စောင်းနေစေတာ။
ရေမြွာရည်အရောင်ပြောင်းလာတာဟာ ကလေးအခြေအနေကိုပြတာဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်အရောင်က နည်းနည်းသာဝါရာကနေ စိမ်းဝါဝါ။ အစိမ်း။ အစိမ်းပုပ်ရောင်တွေဟာ ဆိုးလာတာကိုပြေနေတာဖြစ်တယ်။ ကလေးရဲ့ ပဌမဆုံးသွားတဲ့ meconium ဝမ်းက ရေမြွာရည်ထဲမှာ အနည်းနဲ့ အများပါနေလို့ဖြစ်တယ်။ အရောင်ရင့်လေ ဆိုးလေ။ ကလေးက မွေးဖွားဖြစ်စဉ်မှာ အဲတာကို ရှူမိနိုင်တယ်။ မွေးမွေးချင်း ကလေးအသက်မရှူတာကို meconium aspiration syndrome လို့ခေါ်တယ်။
ရေမြွာရည်နောက်တာအပြင် မိခင်လောင်းက ကလေးလှုပ်တာနည်းလာတာudk သတိထားမိနိုင်တယ်။ ကလေးနှလုံးခုန် နှေးလာ-မြန်လာနိုင်တယ်။ ကလေးနှလုံးခုန်တာကို စက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နိုင်ရင် မးမမှန်တာ တွေ့လာနိုင်တယ်။
အသက်ရှူလမ်းအခက်အခဲ။ ကလေးအနေအထားမူမမှန်ခခြင်း။ ကလေးများခြင်း Shoulder dystocia ကလေး ပခုံးကြပ်နေခြင်း။ Nuchal cord ချက်ကြိုးလည်ပင်းပတ်နေခြင်း။ Placental abruption အထဲမှာ အချင်းကွာခြင်း။ fetal ductus arteriosus ခေါ်သွေးလွှတ်ကြော စောပိတ်သွားခြင်း Uterine rupture သားအိမ်ကွဲခြင်း။ Intrahepatic cholestasis မိခင်အသည်းမကောင်းဖြစ်လာခြင်း။
အဲလိုဖြစ်လာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ကလေးကို မြန်မြန်မွေးလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ လိုအပ်လာရင် ချက်ချင်း ခွဲမွေးပေးရမယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်း အသက်ရှူနိုင်အောင်။ နှလုံးခုန်နိုင်အောင်နဲ့ တခြားလိုတာတွေ ဆက်လုပ်ပေးရမယ်။
ရေမြွာဆင်းတာက ရေမြွာအိတ်ပေါက်လို့ဖြစ်တယ်။ မမွေးခင်မှာ ရေဆင်းတယ်၊ အဝတ်ကိုစိုလာတယ်ဆိုရင် ရေမြွာအိတ်ပေါက်တာဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ဝန်အားလုံးရဲ့ ၃% မှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ စိုးရိမ်စရာမလိုတာရော ချက်ချင်းလုပ်ပေးရမှာပါရှိတယ်။
ကလေးကို ဂရုစိုက်ရမယ်။ စိမ်းပေါက်တာသာဆိုရင် စောင့်လို့ရတယ်။ ရေမြွာအိတ်ကိုချုပ်တယ်လို့တော့ ဆရာ မသိပါ။ သားအိမ်စောပွင့်တာကိုသာ ပြန်ချုပ်ရပါတယ်။ ကလေးလှုတ်နေရင် ကောင်းတယ်။ စောမွေးရင် ကလေးကို အထူး ဂရုစိုက်ရတယ်။ စောမွေးလည်း ကလေးကောင်းတာတွေ များပါတယ်။ Premature labor ကလေးစောမွေးခြင်းစာ ဖတ်နိုင်တယ်။
Premature rupture of membranes (PROM) ဆိုတာ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပါတ်နောက်မှာ ရေ-အရည် ဆင်းတာကို ခေါ်တယ်။ ဗိုက်မနာသေးဘူး။ သွေးလဲမဆင်းသေးဘူး။ ၃၇ ပတ် မတိုင်ခင်အဲလိုဖြစ်တာ။ Spontaneous premature rupture of the membranes (SPROM) ဆိုတာ ပုံမှန်၊ ရေမြွာလည်းပေါက်မယ်။ မွေးဘို့ဖြစ်တာတယ်။
စောမွေးတာတွေရဲ့ ၈၅% မှာ ကလေးမကျန်းမာတာနဲ့ သေဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၃ဝ-၄ဝ% က PPROM ကနေ စောမွေးတာဖြစ်တယ်။ မွေးလမ်းကို လက်နဲ့စမ်းတာ မလုပ်ပဲထားရတယ်။ ပေါက်တာသေချာဘို့ မွေးလမ်းထဲကိရိယာ ထည့်ကြည့်မယ်။ အရည်က အယ်လ်ကာလိုင်းဓါတ်ရှိတာကို Nitrazine paper နဲ့စမ်းနိုင်တယ်။ အာလ်ထွာဆောင်း ရိုက်နိုင်တယ်။ ရေမြွာရည်၊ ကလေးအသက်၊ အလေးချိန်၊ အနေအထား၊ စတာတွေကိုသိရမယ်။
ရေမြွာပေါက်ပြီးရင် ၉ဝ% က ဆက်မွေးတယ်။ ၂၄ နာရီသာကြာတတ်တယ်။ ပေါက်နေတာကြာရင် ပိုးဝင်တာကို သတိထားရတော့မယ်။ chorioamnionitis ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကလေးအတွက် သတိထားရမှာတွေကတော့ ပိုးဝင်တာ၊ အချင်းအထဲမှာကွာတာ၊ ကလေးမွန်းတာ၊ ကလေးချို့ယွင်းတာ၊ အထဲ ဒါမှမဟုတ် အပြင်ရောက်မှ ကလေးမရှင်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ၁% သေဆုံးနိုင်တယ်။
မွေးပေးရတော့မလား၊ စောင့်နိုင်သေးလား ချိန်ဆရတယ်။ လစေ့နေရင် မွေးပေးသင့်တယ်။
1. IV Antibiotics — Ampicillin2g q6h and Erythromycin 250 mg q6h ထိုးပေးမယ်။
2. စားဆေး Erythromycin တမျိုးတည်းဖြစ်ဖြစ်၊ amoxicillin clavulanic acid တမျိုးတည်းဖြစ်ဖြစ်၊ amoxicillin clavulanic acid + erythromycin ဖြစ်ဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ ၇ ရက်အများဆုံးပေးတယ်။
Corticosteroids ဆေးကို ကလေး ၂၄-၃၄ ပါတ်မှာ အဆုပ်အားကောင်းအောင်ပေးနိုင်တယ်။ ဆေးရုံတင်ဘို့လိုနိုင်တယ်။ ကလေးအခြေအနေတွေလည်း ကြည့်နေရမယ်။
1. betamethasone 12 mg IM twice ina24-hour interval ဒါမှမဟုတ်
2. dexamethasone6mg q12h4doses ပေးတယ်။
3. Tocolytics ဆေးလဲသုံးတယ်။ လေ့လာမှုမစုံသေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးရဲ့ မွေးလာမယ့်ကလေးဟာ မိခင်သားအိမ်ထဲမှာ ရေမြွာရည်အပြည့်ရှိတဲ့ အိတ်လေးထဲမှာ နေတယ်။ ရေမြွာရည်ဆိုတာ သွေးလိုပဲ အမြဲလည်ပတ်နေတယ်။ ကိုယ်ဝန်သက်ထက်ဝက်ရှိတဲ့နောက်မှာ ရေမြွာရည်ဆိုတာ နေ့စဉ် ကလေးဆီး 700ml/day နဲ့ အဆုပ်ကနေစွန့်ထုတ်ရည် 350ml/day ပါဝင်နေတယ်။ ကလေးကအဲတာကို မျိုချတယ်။ မိခင်သွေးလှည့်စနစ်ထဲပြန်ရောက်တယ်။ ရေမြွာရည်အိတ်နံရံကသွေးကြောလေးတွေကနေ ချက်ကြိုးသွေးကြောထဲရောက်တယ်။
ရေမြွာရည် အနည်း-အများကို Prolactin နဲ့ Prostaglandins ဟော်မုန်းတွေကနေသက်ရောက်တယ်။ osmotic နဲ့ hydrostatic forces အရည်သဘာဝဖိအားကြောင့်လည်းပါတယ်။ ကလေးအခြေအနေလည်းပါတယ်။ မိခင် ရေသောက်နည်းတာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ နေ့စဉ် နည်းနည်းပြောင်းနေတယ်။ မွေးကာနီးလာရင် နည်းနည်းလာတယ်။ အဲတာပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။
ရေမြွာရည်များလွန်းတာကို Polyhydramnios ခေါ်တယ်။ နည်းလွန်းတာကို Oligohydramnios ခေါ်တယ်။ အနည်း-အများ အာလ်ထွာဆောင်းအဖြေမှာပေါ်တယ်။ Amniotic Fluid Index လို့ခေါ်တယ်။ ဥပမာ Amniotic Fluid Index (AFI) = 10cm လို့ရေးမှတ်တယ်။ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာကို နည်းတယ် များတယ်ခေါ်မလဲ ပြောရတာမတိကျလှပါ။ ပေါ့ကက် ခေါ် အိတ် လေးခန်းရှိတယ်။
ရေမြွာရည်နည်းရင် ဗိုက်ပေါ်ကနေကလေးကိုစမ်းရတာ သိသာနေမယ်။ ကလေးလှုပ်ရှားမှုလည်းနည်းမယ်။ များနေရင် ဗိုက်အရွယ်အစားပိုကြီးမယ်။ ကလေးကိုစမ်းရတာခက်မယ်။ အပြင်ကနေ ကလေးနှလုံးခုန်သံနားထောင်ရတာခက်တယ်။ မိခင်အနေရခက်တယ်။ အသက်ရှူခက်မယ်။ မိန်မကိုယ်မှာ သွေးပြန်ကြောဖေါင်းတာ။ ကိုယ်ရောင်တာ၊ အစာအိမ်အနေရခက်တာတွေ ရှိနိုင်တယ်။
ရေမြွာရည်ထုထည် 500mls ထက်နည်းတာ၊ သို့မဟုတ် <2cm maximum pool သို့မဟုတ် AFI <5ကို ရေမြွာရည်နည်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃% ကနေ ၅% ဟာ ရေမြွာရည်နည်းကြတယ်။ နည်းတာက ၂ မျိုး ရှိသေးတယ်။
Physiological oligohydramnios ဇီဝကမ္မအရနည်းခြင်း၊
ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်မှာ ၃၇ ပတ်၊ မွေးကာနီးလာရင်ဖြစ်တယ်။ ခန့်မှန်းရက်ထက်နောက်ကျသူတွေမျာလည်းနည်းတယ်။ နည်းတိုင်း အခက်အခဲရှိမယ်လို့ တန်းမပြောနိုင်ပါ။
Pathological oligohydramnios ရောဂါရှိတဲ့ရေမြွာရည်နည်းခြင်း
ကလေးဆီကစွန့်ထုတ်မှုနည်းလို့ဖြစ်တယ်။ မိခင်ကိုယ်ဝန်ပုံမမှန်မဟုတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်။ ကလေးဖွံထွားမှု အကန့်အသတ်ရှိမယ်။
ထုထည် 2000 mls ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် >8cm maximum pool သို့မဟုတ် AFI >25cm အထိရှိတာကိုခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၁% ကနေ ၃% ရှိတာကိုခေါ်တယ်။ သူတို့ထဲက ၆ဝ% မြှ ဘာကြောင့်အဲလိုဖြစ်ရသလဲ မသိပါ။ ကလေးက ဆီးသွားများတာ၊ မျိုချတာနည်းတာ၊ အချင်းကတဆင့်ရေပို့စနစ်များတာတွေကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မိခင်မှာ ဆီးချိုရှိနေရင်၊ Rh သွေးအုပ်စုအဆင်မသင့်ရင်၊ ကလေးမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေကနေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ အများစုမှာ အခက်အခဲမရှိ မွေးပါတယ်။ တချို့မှာ စောမွေးတယ်။ ကလေးအနေအထား ပြောင်းနိုင်တယ်။ ချက်ကြိုးကျွံကျတတ်တယ်။ အထဲမှာ အချင်းကွာတတ်တယ်။ အဲလိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ကို ဗိုက်မနာခင် ဆေးနဲ့ မွေးအောင် လုပ်ပေးရတတ်တယ်။
နယူးဒေလီမှာ မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေအတွက် ယမုန်ဆေးခန်းလေးမှာ ၂ဝဝ၆ နိုဝင်္ဘာလကနေ ၂ဝ၁၄ စက်တင်္ဘာလအထိ မွေးလူနာတွေ ကြည့်ပေး၊ မွေးပေးခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် (၃၄၉) ယောက်။ Blue baby ခေါ် မွေးမွေးခြင်း အသက်မရှူ ပြာနှမ်းနေတဲ့ကလေးပေါင်း (၇) ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဆေးခန်းမှာ အောက်စီဂျင် မရှိပါ။ ဘာစက်မှမရှိပါ။ ဆရာမတွေကလည်း ကျွန်တော်သင်ပေးထားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ။ ကလေးတွေကံနဲ့ ဆရာဝန်ကံသာ အားကိုးရတယ်။ အဲဒီကလေးတွေအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်နဲ့ပုတ်ရတယ်။ ဆေးလိုတာထိုးရတယ်။ ပါးစပ်နဲ့တေ့မှုတ်ရတယ်။ အဲတာ Life kiss အစစ်။